DP 6.17 किन मन्दिरमा बलि चढाउने चलन हुन्छ ? – www.kamalsfabulous.com/ibook
DP 6.17 किन मन्दिरमा बलि चढाउने चलन हुन्छ ?
तीनै सावित्र िमातालाइर्न इस्वरी,वा दुर्गामाता भनिन्छ । त्यसैलेउहाँकोधेरैहातभउको रुपमा वर्णन गरिउको छ ।कहिले कहिले उहाँको हजारहातभएको रुपको वर्णन गरिएको छ । बिभिननयुगमा देवताहरुलेअसुरहरुसँगलडाल्गर्न उनै यस्वरीको आरधनागरिु ह्तियारहरुप्राप्तगरेकोशास्त्रमा वयान छ । मानिसहरुलाइपाि बिभिन्नआपदविपदमा उनै इस्वरीको आरधना गरेर बिभिन्न आपदबाट बचाइदिनको लाग् िआरधना पुजा गरिने चलन छ ।तीमाता हतयार शक्तिका रुपभएको भएर तीनकोमन्दिरमा बिभिन्नहतियारहरकोपनि पुजागर्ने चलन छ। इस्वरमिाता सँहारकता, बिजयका प्रतिक, असुरहरको सँहारक भउको भएर देवीकामन्दिरमा पुजाका साथसाथै बिभिन्नबलि चढाउने चलनछ । देवलिाइ खुसि तुल्याउन, उहाका सत्रुका बाहनहरको बलि चढाइउको हो । तर मानिसले यसकुराको अर्थ नबुझिकन छोरा जाँचमा पास गराइदिनुसभनेर गरेको पुजावा मासुखान मनलोरकिनेरल्याएको भाले यसो माताको मन्दिरमा लगि काटौँ र माता लाइ पनि झुक्याएर आआँै भनेर गरिएका पुजा र बलिले झन गलत प्रभाव पार्न पनि सक्लान् । मासु खान मातालाइ नै झुक्याउनु पर्दैन । पुजामा भक्ति आवश्यक हुन्छ । नजानेको बच्चा भएर गरेका पुजामा बुझेका माताहरु कुनै गल्ती भए पनि चित्त नदुखाउलान् तर जान्ने पल्टेरबलि जढाउने जस्ता गहिरा बचनबद्ध भएर गरिएका पुजामा त्यस्तै भक्ति पनि आवश्यक होला नत्र बलि चढाउने बोका किन्न बजार धाउन सुरुगरे देखि बोकाको बलि चढाएर बलिको मासु पोलेर पकाएर खाएर पचाउदा पनि माताको नाम सम्झन नभ्याउनेहरुले चढाएको बलिको कत्तिक महत्व भयो होला ? माताको भक्तिको लागि मन धन लगाएर पुजाआजा, स्तुति गरेर मातालाइ अझ खुसी पार्ने उद्देश्यले बलि चढाएर त्यस बलिको मासु माताको प्रसादको रुपमा लिएर त्यस प्रसादलाई सबै माताका भक्तहरुलाई बाँडेर बाँकी केही आफ्ना घरका सदस्यलाई पनि प्रसादको रुपमा बाँडेर खान मन भएमा अलिबढी नै पुजार बलिको अर्थ लाग्ला । त्यसैले बिजया दशमिको बेलामा दुर्गा माताका मनिदरहरुमा बिभिन्न पुजाहरुका साथै बलि दिने चलन चलेकोहो ।
मन्दिरमा बलि दिन हुन्छकि हुँदैन भनेर बेलाबेलामा समाजका नया क्रान्तिकारीहरुले आबाज उठाउने चलन छ । भित्र जे जस्ता भए पनि बाहिर देखाउनका लागि साकाहारी बन्न रुचाउनेहरु पनि धेरै नै हुन्छन् । मन्दिरका पुजारी पनि सबैको अर्थ बेलामानै बुझ्न नसकेका हुन सक्दछन् । यसै हो भनेर किटान गर्न ती पुजारीका नातीका पालासम्ममा तीनमा पुजारी पन एक भक्ति भन्दा पैतृक रोजगारमा आइसकेका हुन्छन् । मन्दिरमा बेलाबेलामा नयाँनया सल्लाहकारहरु आइ नयाक्रान्तिका सल्लाहहरु दिदै मन्दिर र सुधारहरुका कार्यहरुभइ रहेका हुन्छन् । त्यसैले देवीका आभाश पाएका सस्ँथापक, पुजारीहरुले स्थापना गरेका मन्दिर र मन्दिरका नियमहरु देवीका आभाश नपाएका नयाँ सल्लाहकार र पुजारीहरु द्धारा परिवर्तन हुन पुग्दा बिभिन्न मन्दिरमा बिभिन्न खालका सँस्कारहरु बन्न गएका हुन् । मैले बलि प्रथाको समर्थन गर्न खोजेको होइन कि ती प्रथाका मुल जरो तर्क के थियो भनेर बुझाउन खोजेको हुँ ।
नेवार सँस्कारमा देवी
नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा नेवार राजाहरुका पालामा विकाश हुनगएको सँस्कार र सँस्कृतिहरु तीनै देवीका भक्ति प्रतिबढी झुकाब भएको सँस्कार थियो । काठमाण्डौ तिनै देवीहरुका मन्दिरलेभरिएको शहर हो । त्यस मन्दिरको अझ नजिकिएर ती सँस्कारहरुलाइ नियाल्ने हो भने हरेक क्षण देवीहरु मनिसका सँसर्गमा छन् भन्ने लाग्दछ । ती सँस्कारहरु त्यहा कहिले सुरुभए भनेर भन्नम सक्दिन । म एतिहास वेत्तापनि होइन । तर देवीहरुको भक्ति र पुजाका बिधिहरुले भरिएको नेवार समुदायको सँस्कार छ । म आफ्mै त्यही सँस्कारमा जन्मेको हुकैको भएर मैलै गरिरो गरेर नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको छु । मेरो जीवनमा विज्ञानको उच्चशिक्षा र चिकित्सा शास्त्रको उच्चशिक्षा प्राप्त गरिसक्दा पनि तीनै सँस्कारकाहरुको सही र सही अर्थ पाउन नसक्दा बढी भौतारिनु परेको थियो । आजको आधुनिक नेवार समाज र नयाँ नेपालमा ती देवीहरुको आभाश बोकेका सँस्कारहरु कतैकतै भिडमा हराउन खोज्छन् । तर कुनै दिन त्यस सभ्यताका हरेक कार्य तीनै देवीहरुका साथसाथ जीवीत छन् जस्ता थिए । काठमाण्डौमा जीवित कुमारीदेवी स्थापनागर्ने चलन थियो र आज पनि केही छन् । ती कुमारीदेवीहरुको छनोट मानिसले नगरेर देवीआफ्mैले वा अन्य अदृश्यहरुले छनौटगर्ने चलन छ । कुनै कुनै राजाहरुका पालामा देवी सँग पासा खेल्ने गरेको भन्ने कथाहरु पनि इतिहाँसमा पाइन्छ । त्यो कत्तिक साँचोहो । कसले ढाँटेर फ्mैलाएकि त्यस्ता अफ्mवाहहरु । नेवारहरु देवी भक्ति भएकाले देवीका बारेमा झुटा अफ्mवाह फ्mैलाए होलान जस्तो चाहीँ लाग्दैन । तर कतिपय कुराका खर्थ लगाउन नसक्दा आफ्नै तर्क बढी थपथाप हुन पुग्यो होला । भित्र कोही बेसरी खोकेका भए बाहिर बस्नेले गानागाइरहेकोजस्तो लागेर अरु सबैलाइ भन्न भ्याए होलान् । हामीमा राजामहाराजाका बारेमा भएको भन्दा धेरै थपेर जयजयकार गर्ने चलन चाहीँ थियो । त्यसैले हाम्रा राजा र राजपरिवारमा बस्नेहरुको दिमागमा भ्रमहरु भरिने अवस्था आउथे । राजा भनेको साँचैको देवताका रुपजस्तो लाग्दा लाग्दा उत्तानो परेर लड्दा पो त अरुलाइ जस्तै जागिरबाट निस्कता सारै मन दुख्ने, फ्mेरी जागिरमा बोलाउँछन् कि भन्ने आशा लागिरहने हुँदो रहेछ, पछि बल्ल बल्ल थाहाभयो उ त अरु जस्तै भैरे जनता जस्तै पो रहेछ । बेलैमा थाहा पाउन पाएको भए जागिरबाटै निकाल्ने थिएनन् कि ? जे भए पनि त्यस सभ्यताका पालामा देवीहरुको बढी आरधनागर्ने प्रचलन थियो । देवीहरु मानिसको आव्हानमा मानिसको सम्सर्ग आउन सकेका, मानिसले त्यसको आभाश पाएका प्रमाणहरु नेपालमा प्रशस्त छन् ।
अझ नेपालमा नेवार समुदायमा भएको सँस्कारको कुरा गर्छु । नेवाार समुदायमा देवी देवता, पितृहरुको रुपका नाचहरु निकाल्ने चलन छ । गाइजात्रा तिनै पितृहरुको नाममा नचाइने नाच हो । भैैरवनाच भन्ने नाचमा देवी देवताहरुको रुपगरेर नाच्ने चलन छ । र त्यस नाचमा देवीहरु त्यसदेवीका रुपगर्नेका शरीरमा प्रवेश गर्ने गरेको चलन छ र म आफ्mै त्यस्ता घटनाहरुमा उपस्थित हुने मौका पाएको छु । ती घटनाहरु झुटा अभिनयहरु हेइनन् । ती देवीहरुका रुप गरेर नाच्नेहरुले अलिअलि त थपथाप पारे होलान् । तर त्यसनाचमा सत्यता पनि त्यत्तिकै छ । ती सत्यतालाइ हरेक मानिसले आफ्mैले सही तर्क लगाउन यस पुस्तकको भावले सिकाउने छ । ती घटनाहरुका रहस्यको पर्दा यस किताबले खोलिदिएको छ । म एक नेवार, नेवार सम्प्रदायका सँस्कारहरुको नै सबैकुराको अर्थ लगाउन नसकेर एक्लै टोलाउनु पर्ने गरेर प्रश्नहरु थुपारी दिएको थियो मलाइ । आज ती प्रश्नहरुका वैज्ञानिक अर्थ र शास्त्रका अर्थहरु केलाएर बुझिने गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु ।